चलचित्र ‘भुईफूल’ विभेद विरुद्धको कडी हो
धरान रंगकर्मीहरुद्धारा अभिनित फरक धारको नेपाली चलिचित्र‘भँईफूल’को छायाँकन सकिएको छ । सिने जगतमा सहायक निर्देशकको भुमिका निर्वाह गर्दै दशक वढीबाट सिने जगतमा नै सक्रिय नेत्र छन्त्यालको डेव्यू हो चलचित्र भँईफूल’। छन्त्यालद्धारा निर्देशित चलचित्र भँईफूल’ पुर्वकै सुन्दर नगरी धरान आसपासको क्षेत्रमा छाँयाकन गरिएको छ । वस्ती भित्रको कथालाई चलचित्र मार्फत देखाउन वढी कोशिस गरिएको छ । लगभग ८० प्रतिशत छायाँकन गाउँमा गरिएको छ । छायाँकन सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको भरौल , धरान र चतरा आसपासको दृष्यहरुलाई चलचित्रमा देख्न सकिन्छ ।चलचित्र ‘भँईफूल’ र यस्ले के सन्देश दिन खोजेको छ त भन्ने विषयमा औजार दैनिकले निर्देशक तथा लेखक नेत्र छन्त्यालसँग गरेको कुराकानी :–
चलिचित्रको नाम नै भँईफूल किन राख्नु भएको हो ?
भँईफूल भन्नासाथ पैतालामुनि कुल्चिएर जाने हो भनेर वुझिन्छ । तर त्यहीँ भँईफूलले हो उपवनहरु सुन्दर वनाएका हुन्छन् । कुनै मन्दिरमा नचढेपनि कसैको शीरमा नसजिएपनि निरन्तर फुल्न नछोड्नु भँईफूलको गुण हो , विशेषता हो । त्यो हामी व्राम्हण्डकै उत्कृष्ट प्राणी भनिएका मानव जातीहरुको लागि सानो सन्देश पनि हो । जीन्दगी सधै आफनो लागि मात्रेै कहाँ हो र ? त्यसैले भँईफूल प्यारो लाग्यो । यही नाम छानेँ ।
नाम अनुसार चलचित्रमा कथा के पाउन सकिन्छ ?
आजभन्दा झण्डै अढाई वर्ष अगाडि ३२ वर्षिया नेपाली चेली पुष्पा वस्नेत सिएनएन सुपर हिरो वनेर संसारभरको न्युज च्यानलहरुमा छाइरहेकी थिइन ।तर त्यहीँ दिन काभ्रेको सानो वान्थली भन्ने ठाउमा ३३ वर्षिया लक्ष्मी परियारलाई वोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाएर मारिएको थियो । र त्यहीँ दिन सोँचे पुष्पा वस्नेतहरुको न्युज वायो ग्राफि लेख्ने त कति रहेछन , रहेछन् । तर ती अभागी लक्ष्मी परियारहरुको कथा कस्ले लेखि दिने ? त्यहीँ लक्ष्मी परियारहरुको कथा हो,भुइँफुल हो । कसैले लेख्न नचाहेको कथा हो.,त्यो मेरो मानसपटमा आयो । त्यहीँ कुरा अव भइँफुलमा देख्न सक्नु हुने छ । लक्ष्मी परियारको कारणले भइँफुल लेख्ने प्रेरणा आयो । तर यो कथा चाहिँ मोरंगको रुपमति दासको पनि हो । महोतरीका रेश्मा भन्ने द्धितीया रसाईलीको पनि हो । कैलालीको माया विकको पनि हो । सिनेमा भनेको कला र व्यापार दुवै हो । दर्शक र समिक्षक दुवैले प्रशंसा गरेको हुनु पर्छ । आज सम्मका धेरै नेपाली सिनेमाहरु दर्शकले रुचाउँदा समिक्षकले नरुचाउने र समिक्षकले तारिफ गर्दा दर्शक नआइदिने भइरहेका छन् । भइँफुलबाट यो समिक्षक र दर्शकवीचको जुन दुरी छ ,त्यो मेटिएर जानेमा विस्वस्त छु । दर्शक समिक्षक दुवैले भइँफुलबाट पुर्ण सुन्तुष्टि पाउने छन् ।
त्यसो भए दर्शकले चलचित्रबाट के पाउँछन सन्देश ?
– सन्देश दिन सक्ने छैन होला । तर पनि विभेद विरुद्धको आन्दोलनको एउटा कडि भँईफुल हो । यो भिन्न परिस्थिती र भिन्न समयमा विभेद विरुद्ध लड्नेहरुको लागि सहयोगी वन्न सक्छ । यस कुरामा हाम्रो टिम ढुक्क छौ । विशेष गरेर जातीय विभेदको कुरालाई अन्त्य गर्नको लागि यो फिल्मले भुमिका खेल्ने छ । राज्यले जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य गरेको धेरै भयो तर समाजमा परिवर्तन देखिदैन । त्यस्ता विभेद र छुवाछुत अदृष्य रुपमा छ । पहिला धारा , ढोका मन्दिरमा देखिने गरि गरिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ मनैदेखि विभेद गरिन्छ । जुन झन डर लाग्दो हो । विभेद जहिले असतm र निरिहमाथि नै हुन्छ । असतm र निरिहलाई झनै दमन गर्नको लागि यो मनको विभेद समाजमा जरो गाडेको छ । जस्ले गर्दा यो समाज झन–झन पछाडि फर्केको छ । अग्रगामी दिशातिर होइन । संसारभरी नै यो सन्देश छर्न फिल्म मार्फत हामी कोशिश गर्नेछौं ।
तर कलाकार त सवै धरानका अनि नयाँ अनुहार छन नी ?
–अवस्य पनि । फिल्म भन्ना साथ कला हो । यो फिल्ममा पनि कलाको भरपुर मजा उठाउन पाउनु हुने छ । जुन आदर्शको कुरा होइन तर सरल तरीकाले हाम्रै वरपरको कथालाई प्रस्तुत गर्दै एकदमै सुन्दर कलात्मक कुरालाई ग्रहण गर्न पाउनु हुन्छ । फिल्मको सुन्दर पक्ष भनेको नै प्रस्तुतीकरण हो । भइँफुलमा कलाकारको अभिनय, लोकसन लगायत फिल्मलाई सुन्दर वनाउन चाहिने सवै पक्षहरु हामी उत्कृष्ट दिने तयारीमा छौं ।
म कलाकार नयाँ र पुरानो भन्दा पनि कलाकारको प्रतिभामा विस्वास गर्छु । धराने कलाकारहरु विश्वास गर्नुको कारण विगत चार पाँच वर्षदेखि निरन्तर म ती कलाकारसँग सहकार्यमा रहेको छु । उनीहरुको सवल पक्ष र दुर्वल पक्षलाई मलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले विश्वासको साथ भन्न चाहन्छु की अव धरानको मात्रै होइन फिल्मी उद्योगले खोज्दा प्रतिभासाली कलाकारहरु भनेर यो फिल्म मार्फत दिपेन्द्रसिंह दर्नाल र तुलसा थापालाई चिनाउने छ । फिल्मी उद्योगले चिन्ने छ । फिल्म उद्योगमा नयाँ कलाकारहरुको जोडदार आगमन हुने छ ।
अन्त्यमा फिल्मबाट तपाईले चाहिँ कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
आफैले आफैलाई भन्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ । तर धेरैको लागि चाहिँ यो भुँइफुल नै पथ प्रदशक वन्ने छ । फिल्म भन्नासाथ आएका दर्शकलाई निराश नवनाउनु पहिलो सर्त हो । त्यसमा केही मनोरन्जन हुन्े नै भयो । सन्देश भन्दा पनि आफ्नै आँखा अगाडि भएको तर वेवास्ता गरिएको विषय वस्तुको बारेमा एक चोटी गंभीर भई सोच्न पनि वाध्य तुल्याउँछ । नेपाली सिने जगतमा पनि चमक धमक धेरै छन् । त्यो चमक धमकले केही गर्दै गर्दैन । दुई दिन मान्छे झुक्याउने मात्रै हो । असली दर्शकको तिर्खा मेटाउने त भइँफुल जस्ता कलात्मक सिनेमा ले नै हो । त्यसका कारणले अपेक्षा त स्वभावतः अहिलेको निर्देशकहरु भन्दा म एक कदम माथि नै छु ।म यसै औजार पत्रिका मार्फत आम दर्शकलाई अव चाडैँ हामी सम्पुर्ण काम सकेर तपाईहरु माझ हल मार्फत आउँदैछौ । अवस्यःहाम्रो यो समाज परिवर्तनको अभियानलाई साथ र सहयोग दिनु हुने छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौ । हामी संभवतः भदौ सम्ममा भइँफल फिल्म हलहरुमा पु¥याउने प्रयत्नमा रहेका छौं।
नेपाली कथानक चलचित्रः भुइँफुल
निर्देशनः नेत्र छन्त्याल
निर्माता :– उर्मिला वान्तवा राई ,प्रस्तुतकर्ता : सरिता राई ।
प्रोडक्सन :–भुमेथान फिल्म प्रोडक्सन प्राली,काठमाण्डौ
कलाकारहरु :– दिपेन्द्रसिह दर्नाल , तुलसा थापा , सुवास थापा , चन्दा राई, विक्रम क्षेत्री लगायतको मुख्य भुमिका ।
सुटिङ स्थल :–धरान, चतरा, भरौल । छायाँकनः– रामेश्वर हुमागाई , संगीतः– रमेश खड्का , नृत्य साइमन राजवंशी , गीत गणेश सुवेदी । श्रृङ्गार नन्दा लिम्वू , पोशाक सुनिता मादेन ।